मैले घरकी नारीलाई अपमान गरेँ की ! |
छोरीलाई एउटा बाबुको पत्र
प्रकाशित मिति :2019-07-16 10:00:41
प्रिय छोरी रश्मी,
आज संसार भरी महिलाको आवाज यसरी गुन्जिरहेको छ की, ‘महिलाहरुले सबै काम गर्न सक्छन्’ भनेर। तर मैलेचाहिँ घरकी नारीहरूप्रति अपमान गरेको बोध भइरहेछ । मैले तिमी र तिम्रो आमालाई अपमान गरेँ, धार्मिक रुढीवादी विचार धाराबाट प्रेरित भएर “छोरीले अंश र वशको रक्षा गर्न सक्दैनन्” भनेर पुरातनवादीले भनेका कुरामा म अलमलिएँ । तर म विवश थिएँ ।
मेरो १८ वर्षको छोरो, तिम्रो भाइ रमेश मोटर साइकल दुर्घटनामा परेपछि म अति दुखि भएँ । तिम्री आमाको पनि मानसिक सन्तुलन गुम्ने जस्तै अबस्था भइसकेको थियो । ७० वर्षीया मेरी आमा त “मेरो कुल नै नष्ट भयो, म त म मरेपछि नर्कमा पर्छु, नाति नभएपछि मेरा बाजे र बाबुलाई कसले तर्पण गर्ला” भन्दै धेरै रोइन् ।
छोराको १३ दिनको क्रिया बसिरहेको बेला उनले मलाई सुटुक्क भनेकी थिइन् “मलाई त जसरी भए पनि नाति चाहिन्छ । आजकल त अस्पतालमा कुन्नि के के गरेर, पनि बच्चा जन्माउँछन रे । त्यसैगरी भए पनि मलाई एउटा नाति पाउ भनिन् ।” त्यो बेलामा मलाई आमाको कुराले उनी बौलाइन्की जस्तै लाग्यो । तर १३ औँ दिन सिद्घिएपछि पनि आमाले त्यही भनिन् ।
तिमीलाई त थाहा छ नि मेरी छोरी, की तराइमा त छोरा नभए वंश नै नष्ट हुन्छ भन्ने चलन छ । तिमी पनि ५ वर्षकी थियौ जब तिम्रो भाई जन्मेको थियो । आमाले त्यो भाइपछि फेरि अर्काे छोरा चाहियो भन्थिन् । आमा यसै बरबराउँछिन् भन्ने ठानेर म वास्तै गर्दिन थिएँ । म स्कुलमा पढाउने शिक्षक त्यसमाथि पनि प्रधानाध्यापक र सबैलाई “छोरोछोरी बराबरी” भनेर पढाउने । मैले कसरी छोरीको वास्ता नगरेर यो उमेरमा छोरीलाई हेपेर छोरा पाउने र भन्ने विचार आउँथ्यो । तिमी सानै थियौ । तिम्री आमाको शरीरमा रगतको कमीे थियो । हामी मध्यमवर्गीय परिवारको भएकाले घरको सबै काम गरेर राती घर धन्दा भ्याइएपछि मेरी आमाको खुट्टामा तेल लगाईदिनु पथ्र्यो । गर्भवस्थामा उनलाई गा¥हो हुन्थ्यो । तर मेरी आमाले बाहिरको काम सघाउने मान्छे राख्न दिनु भएन । “बुहारीले घर धन्दा गर्नै पर्छ । हामीले पनि ६ वटा बच्चा पाउँदा पनि काम ग¥र्यौ । तेरी स्वास्नी दुई चोटी गर्भवती हुँदैमा के को कमजोरी हुन्थी र काम गर्न मान्छे राख्नु पर्ने” भन्थिन् । सुदूर पश्चिमबाट आएकी आमा सबैलाई आफू जस्तै बलिई ठान्थिन् । बिचरी, तिम्री आमा उदास अनुहारले मलाई हेरथिन् । तर म लाज मानेर उनीबाट आँखा लुकाउँथे ।
मेरी विधुवा आमालाई के भनेर सम्झाउने र ? म घरबाट निस्केर दोकानमा चिया खाएर बस्थेँ । तिम्रो भाई २ वर्षको भएपछि मैले परिवार नियोजन गर्ने निधो गरे । तर कसरी मेरी आमाले थाहा पाएपछि एउटा डोरी ल्याएर भनिन् “तैले आफूलाई खसी पारेको दिन म यही डोरीले झुन्डिएर मर्छु” । एक वर्षपछि तिम्री आमा फेरि गर्भवती भइन् । आमाले भारतमा लगेर जाँच गर्न आदेश दिँदै भनिन्, “छोरी छ भने उतै फालिदिनु । छोरा छ भने मात्र बुहारीलाई गर्भ फालेपछि घरमा ल्याउनु ।” हस्पिलटमा लगेर ५ महिनाको गर्भ जाँच गर्दा छोरी भन्ने थाहा पाएपछि त्यहीँ रु तीन हजार तिरेर गर्भपतन गरायौं । घर ल्याउँदा त तिम्री आमा पहेँली भएकी थिइन । उनी रोइरहन्थिन् ।
गर्भमा रहेको छोरी फालेर आएको थाहा पाएपछि मेरी आमाचाहिँ खुशी थिइन् । मेरा अरु ६ दिदीबहिनी भएकोले मेरी आमालाई जसरी पनि मबाट दुइवटा छोरा चाहिएको थियो । तर एकदिन तिम्री आमालाई विरामी भई अस्पतालमा लग्दा स्त्री रोग विशेषज्ञले “यिनी साह्रै कमजोर छिन् । अब कमसेकम ५ वर्ष बच्चा नपाउनु” भनिन् । मेरी आमालाई यो कुरा सुनाएपछि उनी साह्रै दुःखी भईन्, रोइन् पनि । तर दोस्रो नाति पाउने इच्छामा उनको केही समय लगाम लागेको थियो ।
छोरी, तिमी १७ वर्ष नपुग्दै आमाले तिम्रो विवाह गराउन विवश गराइन् । भारतमा एक बाहुन इन्जिनियरसँग तिम्रो विवाह हुने भनेपछि उनी साह्रै खुसी भइन् । विवाहपछि लगत्तै नै तिम्रो छोरी भयो । तिम्रो बज्यै फेरि दुःखी भइन् । समयसँगै मेरी आमाको करकर पनि केही कम भएको थिएन ।
तर २ वर्ष अघि बाटोमा हिँडीरहेको तिम्रो भाइको दुर्घटनामा टिप्परको ठक्करले मृत्यृ भएपछि त तिम्री हजुरआमा त दिनरात “कुल नै नष्ट भयो” भयो भनेर रुदाँ तिम्री आमा पनि रुन्थिन् चुपचाप । तिम्रो भाईको मृत्यृपछि गाउँका केही महिला आएर मेरी आमालाई मेरो दोस्रो विवाह गर्ने सल्लाह दिए । तिम्री आमालाई भनेको त उनले भनिन् “तिमीले विवाह ग¥यौं भने म त विषखाएर मर्छु ।” त्यो सुनेपछि म हच्किएँ । तर तिम्री हजुर आमा र पण्डितले त जसरी भए पनि एउटा छोरा चाहिन्छ नै भनेपछि मैले एक उपाय निकालेँ । म बरु सरोगेट आमाबाट बच्चा जन्माउँछु ।
यो सुनेर मेरी आमा प्रसन्न भइन् । त्यो दिन उनले केही गाँस भात बढी खाइन् । भारतमा गएर स्त्री रोग विशेषज्ञहरूसंग सम्बन्ध राखेपछि उनीहरूले भाडाको आमा मिलाइदिए । ७–८ महिना म र तिम्री आमा “मेरो कामको” लागि भनेर भारतमा बस्यौं र उधारो पाठेघरबाट बच्चा जन्माएर ल्यायौं । मेरी आमाको खुशी थिईन् । मैले आमालाई “मेरै बच्चा” भनेको थिएँ । “मेरो नाति नै फर्केर आयो, अब स्वर्ग गइन्छ” भन्थिन् मेरी आमा । तर यो बच्चा मेरो थिएन । एक अविवाहित महिलाले एक सरकारी प्रसूति गृहमा जन्माएको बच्चा थियो र हामीले उनलाई आफ्नो नाम दिएका थियौँ ।
छोरी, तिमीले पनि यसलाई मेरो छोरो भन्ठानेकी थियौ कि ? तिमीसँग झुटो बोल्दा मलाई साह्रै गाह्रो त भएको थियो तर समाजको अघि “छोरोको बाउ” भनेर नाक बचाउन र मरेपछि छोराले दागबत्ति देओस् भन्ने लोभले मैले सत्य खोल्न सकिन । छोराको नाम पनि रमेश नै राखियो । त्यसको केही वर्षपछि मेरी आमा पनि खसिन् । अहिले रमेश हामीसँग छ । पढ्छ, खेल्छ । तर छोरी, समाजको दबाबमा आएर मैले तिम्री आमाको मन नबुझेर अरुको सन्तानलाई आफ्नो छोरो बनाएँ । दुबैको अपमान गरे झैं लागिरहेछ । तिम्री आमाले रमेशप्रति सबै राम्रो व्यबहार गर्छिन् तर उनले कहिले पनि रमेशलाई माया गर्न सकिनन् । यदि छोरा भएन भने “तिम्रो लोग्नेको दोस्रो विवाह गरिदिन्छु” भन्ने मेरो आमाको धम्कीले उनी डराईन् । उनले विद्रोह गर्न सकिनन् । उनले मनमा दुःख भए पनि छोरा स्विकार गरेकी छिन् । उनले केहिदिन अघि भनिन्, “छोरीलाई बोलाएर सम्पत्ति छोरी र रमेशको नाममा गरिदेउ र मेरी छोरीलाई सबै कुरा सत्य भनिदेउ ।”
अब मेरी आमा नभएपछि त सत्य बोल्छु भनेर योे पत्र लेग्दैछु । प्रिय छोरी रश्मी, भेट हुँदा शायद यो सबै कुरा भन्न सक्दिन होला । त्यसैले यो चिठ्ठी लेखिरहेछु । पत्र पाउनेबित्तिकै तुरुन्त आउ र मेरो मनलाई शान्त गराउ । हाम्रो जग्गा जमिन मैले रमेश र तिमीलाई दिनेछु । पछि बिस्तारै रमेशलाई पनि यसको बारेमा जानकारी दिनै पर्ला । केही समयपछि शायद तिर्थ यात्रा गर्न जान्छौ ।
उही तिम्रो बुबा,